Hubanti la’aanta hareysay doorashada Koonfur Galbeed | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Hubanti la’aanta hareysay doorashada Koonfur Galbeed
Hubanti la’aanta hareysay doorashada Koonfur Galbeed
Waxaa markii saddexaad dib u dhac uu ku yimid doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Qaar kamid ah musharaxiinta Koonfur Galbeed ayaa walaac ka muujiyay qaabka guddiga doorashada ay wax u wadaan.
Musharaxiinta qaar ayaa sheegay in guddiga doorashada aysan u madaxbanaaneyn howsha loo igmaday.
War ka soo baxay musharraxiinta lagu kala magacaabo Aaadan Maxamed Nuur, Mukhtaar Roobow iyo Ibraahim Macallin Nuur ayaa lagu sheegay in aanan wax wadatashi ah lagala yeelanin go’aannada dib loogu dhigay wakhtiga doorashada.
Walaaca ugu badan iyo kalsooni darrada soo wajahday siyaasiyiinta qaar ayaa ka yimid dib u dhaca marar badan ku timid doorashada oo hadda loo asteeyay inay qabsoonto 19-ka bishan Diseembar.
Guddiga doorashada ayaa sheegay in ujeedada dib loogu dhigay wakhtiga doorashada ay tahay sidii diyaar garow buuxa loogu sameyn lahaa.
Hasa yeeshee dib u dhaca ku yimid doorashada ayaa waxaa ka dhashay shaki xoogan, kadib markii dowladda federaalka ay ciidamo boolis ah u dirtay magaalada Baydhaboka, iyadoo siyaasiyiinta qaar na ay arrintaasi ku micneeyeen faragalin lagu haya doorashada.
Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur, oo loo yaqaanno Sheekh Aadan Madoobe ayaa goor sii horreysay BBC-da u muujiyay walaaciisa ku aaddan arrintaas, wuxuuna yiri:
“Annagu waxaan halkan u joognay inaan doorashada la soconno, dadkana farxad kula dabaal dagno, horayba Baydhabo wey u joogeen ciidan nooc walba leh oo ka socda dowladda federaalka iyo tan gobolkaba, laakiin hadda waxaa la keenay ciidan hor leh oo diyaarad lagu keenay, arrintaasna shaki weyn ayey dhalisay sababtoo ah markii horeba guddiga doorashada ayaa la sheegayay in cadaadis xooggan lagu hayay”.
Hadalka xildhibanaka ayaa waxaa meesha ka saaray mas’uuliyiinta amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta u sheegay in sababta loo keenay ciidanka ay tahay sugidda ammaanka doorashada iyo musharraxiinta oo kaliya.
Wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa dhanka kale BBC-da u xaqiijiyay in iyagu ay dalbadeen ciidankaas, arrintaas oo ay sii xaqiijisay wasaaradda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed.
Muxuu yahay mustaqbalka doorashada Koonfur Galbeed?
“Xitaa 19-ka bishan oo ah wakhtiga la qabtay lama hubo in ay ku dhici doonto doorashada, sababtoo ah ma aha wakhti ku filan diyaar garowga laga hadlayay. Arrinta kale ee jirtana waa in doorashadan ay u baahantahay korjoogeyaal ajaanib ah oo ka socda beesha caalamka, sidaan wada ognahayna shakhsiyaadkaas waxay u badantahay iney ka hor 25-ka bisha aadaan fasaxa diinta masiixiyiinta, ayna suurtoobi weydo iney la socdaan hannaanka doorashada, lagana yaabo iney dalbadaan in dib loo sii dhigo”. Waxaa sidaasi yiri Maxamed Cali barre.
In kastoo mas’uuliyiinta dowladda dhexe marar kala duwan lagu eedeeyay fara galinta doorashada Koonfur Galbeed, haddana ma jiraan caddeymo muujinaya arrintaas ama qirasho dhanka dowladda.
Previous articleShir looga hadlayay arrimaha Dastuurka oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay
Next articleMadaxda Sare oo isku haysta arrimaha Koonfur Galbeed